ALASKAN KLEE KAI DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Alaskan Klee Kai Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Kaia Ghadafi Alaska Husky
Liiska Alaskan Klee Kai Mix Eeyaha Taranka
Guntin Alaskan Husky
Alaskan Klee Kai waa nooc yar oo ka mid ah Alaskan Husky, in kasta oo ay muuqaal ahaan u egtahay Siberian Husky. Waa inta udhaxeysa 10-40 rodol (4.3-18 kg), wuxuu ku yimaadaa 3 nooc oo cabbir ah iyo 3 midab.
Alaskan Klee Kais ayaa daadisay, ciyey oo leh heer sare oo tamar ah, sidaas darteed iyaga kama dhigayso xulashooyin ku habboon qof walba. Iyadoo aan lahayn qaddarka saxda ah ee jimicsi maalinle ah iyo jir ahaaneed waxay noqon karaan kuwo sarreeya. Si kastaba ha noqotee, haddii guriga ku habboon, Klee Kai wuxuu noqon karaa wehel la yaab leh. Waa kuwo saaxiibtinimo leh laakiin xoogaa ku xeel dheer shisheeyaha. Bulsho wanaagsan . Dabacsan oo aad u jecel, waxay u baahan yihiin insaanka hareerahooda ah inay noqdaan kuwo deggan laakiin adag, kalsooni leh oo hoggaamiyeyaasha xirmooyinka joogtada ah. Ha u oggolaan Alaskan Klee Kai inuu horumariyo Cudurka Dog yar .
Dhererka: Jaangooyada 15 - 17.5 inji (38 - 42 cm)
Dhererka: Ghadafi 13 - 15 inji (33 - 39 cm)
Dhererka: Cayaartu ka yar tahay 13 inji (33 cm)
Miisaanka: Heerka 23 rodol (10 kg)
eyda sanka casaanka leh ayaa dhala
Miisaanka: Guntin 15 rodol (7 kg)
Miisaanka: Cunto kayar 10 rodol (4.3 kg)
U nuglaanshaha caloosha xasaasiga ah
Cabirkooda awgood, eeyahaani waxay ku noolaan karaan guri dabaq ah, laakiin guri leh ugu yaraan daarad yar ayaa lagula talinayaa.
Eeyadan waa in si joogto ah loo jimicsado. Waa in la qaataa socod dheer maalinle ah .
bakoorad corso weyn oo isku dhafan eeyo yaryar oo iib ah
Lama yaqaan wali, laakiin 14 sano waa qiyaas wanaagsan.
Celcelis ahaan 1 - 3 eyyo
Noocani wuxuu daadiyaa waana in lagu shanleeyo oo lagu cadeeyo si joogto ah. Noocani waa celcelis daadiya.
Alaskan Klee Kai waxay leedahay wax badan Alaskan iyo Siberia Husky , iyo waliba qaddar yar oo ah American Eskimo dhexdeeda Waxaa la soo saaray sanadihii 70-meeyadii waana nooc cusub oo cusub. Waxaa loo soo saaray inay wehel noqdaan oo tiradooda ayaa sii kordheysa.
Eeg tusaalooyin badan oo ah Alaskan Klee Kai
Alaskan Klee Kai Dog Sawirada Sawirka 1
Alaskan Klee Kai Dog Sawirada Sawirka 2
eeyaha u eg dachshunds
sawirada god buluug ah
eeyaha hound ee lagu qasay shaybaarka